कसैलाई यस्तो नपरोस ! १३ महिने दु’धे बच्चा र श्रीमती छोडेर श्रीमान अर्कैको श्रीमतीसंग बे’पता, रमाउने उमेरमा के भो यस्तो (भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/कसैलाई यस्तो नपरोस ! १३ महिने दु’धे बच्चा र श्रीमती छोडेर श्रीमान अर्कैको श्रीमतीसंग बे’पता, रमाउने उमेरमा के भो यस्तो (भिडियो)
काठमाडौ । अहिले केही समयदेखिनै मिडियामा श्रीमान बे’पत्ता र सम्पती सहित टाप कसेका धेरै कुराहरु आईरहेका छन । आज हामीले पनि त्यही कुरा लिएर आएका छौ, यो परिबारमा यति दु:ख छ कि उनी अहिले कतै केही उपाय नपाएर मिडियामा आउन बाध्य भएकी छिन । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आज हामी कुरा गर्दैछौ किर्र्तीपुर माइत भएर तारकेश्वर नगरपालिका वडा न. ४ मा बसोबास गर्ने सज्जनी कटुवालका श्रीमान राज कटुवालको । उनी केही महिनादेखि बेपता छन, परिबारमा र छरछिमेकमा शंका छ कि उनी अर्कै केटीस“ग लागेर अथवा भनौ उनीस“गै कुलेलाम ठो’के भनेर ।
केही महिना अगाडि काममा जान्छु भनेर हिडेका राज एकाएक गा’यब भए र फोन पनि उठाउन छाडे । त्यसपछि यिनले प्र’हरीमा खबर गरिन तर त्यहाबाट पनि केही समाधान हुन सकेन । प्रहरी काम भईरहेको भन्छ तर अझैसम्म प’त्ता लगाउन नसकेपछि परिबारको बि’चल्ली भएपछि अहिले मिडियामा यसरी रुदै आएकी छिन — ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अख्तियारः ‘साना माछा समाउने, ठूला सँग रमाउने’
गोंगबु ह’त्या प्रकरण : एक युवती पक्रा उ, कसरी भयो घ टना ?
बङ्गलादेशमा पढिरहेका विद्यार्थी भन्छन् : नेपाल फर्केर सेवा गर्न चाहन्छौँ !